यात्राका ........सुस्केराहरु: 2009
हातका रेखामा छेकौं सपनी ।
साथी हो देखौं न देखौं सपनी ।
तिमीले चाहेमा चन्द्र टेकिन्छ ।
नलेखौं कथा हो लेखौं सपनी ।
गाउँमा रहर फुल्यो ढपक्कै ।
मनको तापले सेकौं सपनी ।
समान संसार तिम्रो र मेरो ।
भत्काऊँ पर्खाल टेकौं सपनी ।
देख्नुछ देख्नुछ आजै देख्नुछ ।
होईन एक अनेकौं सपनी ।
Posted by दिनेश राज at 21:25
एकपाटो काँढे तार, एकपाटो छुरा धार ।
बिर्सदैछु आँखा चिम्ली,नसोध है समाचार ।
बिसाएर आएँ भारी ,सुनकोशी तिर पारी ।
बढ्दैछ नि पीर लौन ,एक दुई तीन चार ।
जति नजिक भएँ म ,उति गहिरो गएँ म ।
आफैंलाई बिर्सि सकें ,नसम्झाऊ बारम्बार ।
हुन्छ रे सत्य हजार, बुझ्नेहरु अनुसार ।
मन छैन सफा भने नगर भो यो श्रृंगार ।
भन्थे बाले ए दिनेश ,पहिला आफूनै चिनेस् ।
बग्नु काल बगेपछि ,केको हार के गुहार ।
Posted by दिनेश राज at 14:13
सुने भावीले भेटिन्छ भन्थे कसैले ।
केहि घाउले चेतिन्छ भन्थे कसैले ।
चुप रहेर हेर्दैछु आमा रोएको ।
घाँटी बोल्नेको रेटिन्छ भन्थे कसैले ।
जति सागर घुमेनि हुन्न निसान ।
हिड्या पाइला मेटिन्छ भन्थे कसैले ।
गर अन्याय मैमाथि न्याय नगर ।
सोझो बीचमा चेपिन्छ भन्थे कसैले ।
मागी आधार उसँग,परें भरोसा ।
ढुङ्गे देउता बेचिन्छ भन्थे कसैले ।
Posted by दिनेश राज at 03:12
उनको बोली मिठो सुनिरहन्छु कुरा म ।
बुझेरै अझै फेरि बुनिरहन्छु कुरा म ।
सुनेर कति खुशी हुदिहोलिन आज त ।
दुनियाँ चाहारेर चुनिरहन्छु कुरा म ।
एकान्त अब कहाँ बाँकि छ र एकान्त ।
सम्झेर हिजोको त्यो गुनिरहन्छु कुरा म ।
मुहार टाढा हुँदा साहारा तिम्रो आवाज ।
पोख्दिन मनभित्रै थुनिरहन्छु कुरा म ।
बगेर छेउ टुप्पा भत्किएमा याद गर्नु ।
दिनेश भन्थ्यो सधैं तुनिरहन्छु कुरा म ।
Posted by दिनेश राज at 04:07
भोलिको चोट आज ,सहेको राम्रो ।
बीचमा अलि दुरी ,भएको राम्रो ।
सिमाना भन्छ लौन टालन आजै
देखिन्छ कहाँ गाग्रो ,चुहेको राम्रो ।
बाँधेर हात कस्ले भेटायो लक्ष्य ।
नजमी सधैं नदी ,बहेको राम्रो ।
नहोस श्राप कुनै आमाको यस्तो ।
जिउँदै मर्नु भन्दा ,तुहेको राम्रो ।
सम्झेर लेखनाथ दिनेश झस्क्यो ।
फलेको बृक्ष ओहो ! नुहेको राम्रो ।
Posted by दिनेश राज at 17:44
कल्पी यस्तै यस्तै दिनेश ।
बिर्सी देऊ कथा घातको ।
Posted by दिनेश राज at 13:01
चोखो माया बोकी ,आउँछु ।
बाँकि सास रोकी ,आउँछु ।
हराउने है अब हामि ।
घर ताल्चा ठोकी ,आउँछु ।
हेर्न लगाई हात, चिना ।
तिथि गते तोकी ,आउँछु ।
तिम्रो सुख मेरो संसार ।
यहि पाठ घोकी ,आउँछु ।
दिनेशले सोध्दा लाजले ।
भन्यौ ओठ टोकी ,आउँछु ।
Posted by दिनेश राज at 20:50
मनको हाल बताउँछ आँसु ।
बिनासित्ति कहाँ आउँछ आँसु ।
बाध्यता थियो या लाज डर ।
सुस्केरामै जो पचाउँछ आँसु ।
मनमा होला के तिनीहरुको ।
जो लेख्छ आँसु जो गाउँछ आँसु ।
मन हलुङ्गो भएर थाहा भो ।
झरे पछि पो मुस्काउँछ आँसु ।
अहँ तिम्रो दैब हैन दिनेश ।
मान्छे हो र त बगाउँछ आँसु ।
Posted by दिनेश राज at 02:04
जति फुकायो उति गाँठो ,कसियो लौ हेर ।
उत्रिनु को सक्यो मायामा ,फसियो लौ हेर ।
आउँछन् सान्त्वना मुठी ,दुई बाँड्नेहरु ।
याचक भएर चोकमा, बसियो लौ हेर ।
जहिले पनि भै रहेर ,मात्र भेटौँ भेटौं ।
जान्न भन्दै उन्कै गल्ली , पसियो लौ हेर ।
आँखामा सपना छैन ,भाग्यमा आबादी ।
गेरु बस्त्र अनि खरानी ,घसियो लौ हेर ।
दिनेशलाई झुक्याए ,भनेर माया हो ।
आफ्नै हातले छुरी ओहो ,धसियो लौ हेर ।
Posted by दिनेश राज at 02:15
कोरा आश्वासन्, छर्क -छर्क फेरि।
भनन अझै नि ,पर्ख -पर्ख फेरि ।
हिजोकाले जे गरे त्यहि गर ।
जिम्मेवारी त हो ,तर्क-तर्क फेरि
छोडेर सहर के जान्छ मेरो ।
गाई डुलाउँछु ,खर्क -खर्क फेरि।
खेतका आली खोज्दैछन टेका ।
ए हातहरु हो , फर्क -फर्क फेरि ।
खहरे सुक्यो, पसिना समुद्रमा ।
असार साउन ,दर्क-दर्क फेरि ।
Posted by दिनेश राज at 23:31
बिहे को प्रसंगमा केहि पक्ष हरुको भाव समेटि हेरेको
पोहोर साल र यो सालमा अन्तर आयो ।
निम्तामा तिम्रो नामसँग मेरो थर आयो ।
जन्मेदेखि खेल्दै भत्काएको आँगन पिँढी ।
बढार्ने आँगन अर्कै, पोत्ने अर्कै घर आयो ।
बिछोडिएको प्रेमि -प्रेमिका -
जस्को आसमा बसे यो मोड सम्म कुरी।
लौ सुन उनको साटो यो कस्तो खबर आयो ।
केहि आफ्ना थपिए ,केहि दुरी नजिक भो ।
केहि आड भरोसा ,केहि चिन्ता डर आयो ।
जन्मी, हुर्की ,बढी ,देखी, साँची बल्ल बल्ल
एउटा आँसु एउटा खुशिको प्रहर आयो ।
Posted by दिनेश राज at 18:04
हातमा लेउ या कचौरामा भिख -भिखै हो ।
खडा छौ तर शिर निहुरिनु स्वभाविकै हो ।
उल्टो बाटो हिंडेर मुक्ति पाउनेहरु धेरै ।
धर्म ,दैब केहि होइन सब तरिकै हो ।
आउँदा जाँदा भेट हुन्छ नचाहदै पनि ।
मनपो टाढा पर्यो त घर नजिकै हो ।
समाउँदैमा कलम,सबैले कहाँ लेख्छन ।
निभबाट आगो झर्नु पर्छ,कुरा ठिकै हो ।
एउटाले हात कोर्छ एउटाले कोर्छ मुटु ।
दिनेश होईन काँढा भन्दा फूल तिखै हो ।
Posted by दिनेश राज at 08:35
बुझेर चोट पारियो ।
अनि हाँसेर टारियो ।
दुईबित्ते साँधेढुङ्गो ।
यता र उति सारियो ।
सक्नेसँग तैं चुप मैं ।
जित्ने लडाइँ हारियो ।
के को फुर्ति बाँकि अब ।
शिखर फेद खारियो ।
अगुवाले क्या बोले नि ।
हुन्देऊ माया मारियो ।
Posted by दिनेश राज at 02:10
बीच बाटो पुगी थाक्नेहरु धेरै ।
किन होला दैब भाक्नेहरु धेरै ।
छाक टार्न हात पसारेको देखी ।
बाघ मुखे थैली ढाक्नेहरु धेरै ।
माथि खोजी हेरेँ तै तै छकि कोहि ।
काम न काज फलाक्नेहरु धेरै ।
वरिपरि हेर्यो ,गर्यो सोधपुछ ।
बञ्चरोले घुँडा ताक्नेहरु धेरै ।
“दिनेश” पाकेन भात यहाँ अझै ?
बहानामा माड चाख्नेहरु धेरै ।
Posted by दिनेश राज at 18:47
भन्यौ, सुनें, बुझेँ तर, गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
जिन्दगीलाई लाको माया, मर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
अरूले राम्रो न मलाई न तिमीलाई भन्छन ।
आफ्नै आँखाबाट चाहिँ, झर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
जिन्दगी खहरे हो भेल आउँछ दुखको सधैं ।
सबैलाई आफ्नो मात्र, तर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
समयमै सोचिहाल माया बस्नु अगाडि नै ।
घाउ न हो लागेपछि, भर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
खुब चाहिन्छ मलजल रेखदेख स्याहार ।
बीउ छरिदैंमा माया, सर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
दोबाटो मन्छ या बुटी लगाऊ किनेर महंगो ।
माया पनि दशा नै हो, टर्न गाह्रो हुन्छ हजुर ।
Posted by दिनेश राज at 17:15
घर छोडी ,कम्ता हण्डर खाइएन आमा ।
छैन काम ,खाने सामल पाइएन आमा।
साहुहरु घरमा ,ताकेता गर्दा हुन् ।
कसरी तिर्नु ,थोरै ऋण लाइएन आमा ।
चुहियो खरको छानो, बुईगल भरी पानी ।
बर्षा लाग्यो, छानो यो साल छाइएन आमा ।
मादलुको ताल सँगै, कम्मर मर्काउँदै।
रोधि प्यारो ,अरु गीत गाइएन आमा ।
फर्कन्छु भोलिनै, झिटिझ्याम्टा कसी।
मर्छु काखमा,अरु धन　चाहिएन आमा ।
Posted by दिनेश राज at 17:40
आफ्नाहरु भाग्दैथिए ,जलाई मेरो घर ।
चुप तमाशा हेरियो , अनि गजल केरियो ।
आउँछन सुखहरु,भन्थे बाटो खोलिदे ।
काँडे तारले घेरियो ,अनि गजल केरियो ।
झुकाउनु पर्छ शिर ,अघि बढ्ने रहरमा
कहाँ कस्लाई टेरियो , अनि गजल केरियो ।
Posted by दिनेश राज at 03:28
लाज लाग्ने नि ! कसैलाई के बताऊँ ।
दर्पण हेरी ,केहि ढाडस लिऊँ क्यारे ।
यो दुनियामा के,कमी छ र आफ्नाको ।
तैपनि लाग्ने , कस्को लागि जिऊँ क्यारे ।
छैनन थाहा छ र पनि यस्तो लाग्छ ।
आउंदै छिन ,यही बसी पर्खिऊँ क्यारे ।
Posted by दिनेश राज at 02:19
सँगी सँग अर्कैका कुरा हुन्छन रे ।
मनमा के बोझ बढ्यो र त्यस्तो कुन्नी ।
Posted by दिनेश राज at 21:38
आँगन चेपिएर पिंढी मात्र बाँकी रहदा ।
निती नियम जलाएर आगोमा सक्नुभो ।
मैले जे बोलें अब त्यही कानुन भन्नु भो ।
बिचार नमिले सत्तोसराप हजार घुर्की
आफ्नैले भए जे सुकै गरुन भन्नु भो ।
Posted by दिनेश राज at 17:32
बिदाइ को घडा राखेको प्रहर याद आयो ।
दुनियाँ देखेपछी बल्ल घर याद आयो ।
जहाँ पनि देखियो बल्दै आगो हुरहुरी ।
घरको मक्किएको काठ ,खर याद आयो ।
उपचार छन नि गर्ने हिम्मत पो छैन ।
ज्युदै मर्ने देखेर जहर याद आयो ।
टुटेपछी हत्केला हात मिलायो कस्ले ?
दुनियाको दुख उठाउने रहर याद आयो ।
एक गाँसको लागी शिर झुकेपछी ।
आमाले खुवाउन गरेको कर याद आयो ।
Posted by दिनेश राज at 04:14
नबोल्ने नसुन्ने दैबलाई अब त ।
इँटा,पत्थर भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
मेरो दैलोमा झुक्किएर पाइला पर्दा
यही हो घर भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
बाँच्न　सार्है गार्हो भो दिनेश हगि ।
लिन्छौ त जहर भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
Posted by दिनेश राज at 19:58
बढेर एउटा बोझ ,बोकेर बिसाउनु छ चिहान ।
कलिलोमै सार्है अमिला , त्यसैले बाँसका तामाहरु ।
खै कस्को भविष्य कसरी उज्वल होला यहाँ ।
ठूला लुट्दै छन देखासिकी गर्दैछन सानाहरु ।
परदेशमा आधिरातको सपनामा रुन्छ दिनेश ।
मझेरिमा भ्यागुत्तो उफ्री ,चुहिन्छन घरका छानाहरु ।
Posted by दिनेश राज at 17:00
पानी सुक्दैन ।
२ सुर्यको मुख
कहिले नि हेर्दैन
रुखको छाँया ।
३ मुटु तोडेर
कसरी आऊँ ?
Posted by दिनेश राज at 16:09
उँभो लाग्यो र ?
घर याद आउँछ
खर छाएको ।
कमिला तांती ।
Posted by दिनेश राज at 16:02
के थाहा भोली समयले कुनकुन रुप देखाउने हो ।
आँसु र रगत मा अब कहाँ तर्सन्छन मान्छेहरु ।
सृष्टी पछी ब्रम्हा खोज्दै भौतारिदै छन यता उता ।
हर एक पत्थर देखाउदै मान्छे भन्छन मान्छेहरु ।
यता हेर्यो आफ्नै उता हेर्यो आफ्नै छन दिनेश ।
सबै तिर तगारा अब कसरी फुत्कन्छन मान्छेहरु ।
Posted by दिनेश राज at 14:32